शिवरात्रिमा ब्रत बस्नुको वैज्ञानिक कारण ! – Saurahaonline.com
शिवरात्रिमा ब्रत बस्नुको वैज्ञानिक कारण !
पवित्रा खड्का, काठमाडौं : आज महाशिवरात्री। हिन्दु धर्मावलम्बीले यो चाडलाई विशेष साधना अनि पूजाआजासहित विशेष रूपमा मनाउँछन्। फागुन कृष्ण चतुर्दशीका दिन मनाइने यस पर्वलाई भगवान शिवको अति प्यारो दिनका रूपमा लिने गरिन्छ।
हिन्दु धर्मशास्त्रअनुसार ब्रह्माले रुद्ररुपी शिवजीलाई उत्पन्न गरेको दिन हो यो। शिव–पार्वतीको विवाह भएको दिन पनि मानिन्छ शिवरात्रीलाई। यस दिनमा श्रद्घालुहरू ब्रत बस्ने गर्छन्। यसरी ब्रत बस्नु स्वास्थ्यको लागि उपयोगी हुने चिकित्सकको भनाइ छ।
ब्रत, उपवास बस्दा अनि ध्यान–योग गर्दा शरीरमा विभिन्न रोग नलाग्नुका साथै शरीर हलुका हुने, दिमाग स्वस्थ रहने र अन्य धेरै फाइदा हुने पोषणविद् डा.अरुणा उप्रेती बताउँछिन्।
‘आधुनिक युगमा ब्रत बस्नु अतिआवश्यक छ, सातामा एक दिन व्रत बस्दा राम्रो हुन्छ, सकेसम्म एक छाक भोकै बस्नु निकै लाभदायी मानिनछ। यसले शरीरलाई रोग लाग्नबाट बचाउँछ,’ डा.उप्रेतीले भनिन्।
शिवरात्रीका दिन झापाको अर्जुनधारा, सुनसरीको रामधुनी र पिण्डेश्वर, खोटाङको हलेसी, मोरङको किराँतेश्वर, गुल्मीको गलेश्वरमा भक्तजनको विशेष भीड लाग्ने गर्दछ।
काठमाडौंको पशुपतिनाथमा आजको दिन भारतलगायत विश्वको विभिन्न स्थानबाट साधुसन्त, भक्तजन आउने गर्छन्। यस दिन व्रतकालमा भगवान शिवको ध्यान, पूजापाठ, जप, जागरण गरी निराहार ब्रत बसी विधिविधान पूरा गरेमा कारोबार सिद्धि,बाधा नास,रोगबाट छुटकारा,शत्रु नास,मोक्ष प्राप्त हुने मान्यता रहिआएको छ।
अहिले आधुनिक विज्ञानले पनि ब्रत बस्दा फाइदा हुने उल्लेख गरेको छ। यो परिवेशमा मानिसले शरीरलाई हानी गर्ने खाना खानुका साथै अस्वस्थ जीवनशैली अपनाइरहेका छन्। डा.उप्रेतीका अनुसार नेपाली चाडपर्वमा मात्र व्रत बस्ने गर्छन्, तर, साताको एक दिन अनिवार्य व्रत बस्नु स्वास्थ्यको लागि अतिआवश्यक छ।
उनी भन्छिन्, ‘हामीले साताको एक दिन अनिवार्य व्रत बस्नु आवश्यक छ, ब्रतको समयमा कोही खाली पेट निरहार बस्छन् त, कोही फलफूल खाएर बस्छन्, पानी पिएर खाली पेट व्रत बस्नु उत्तम मानिन्छ।’
खाली पेट बस्दा मोटोपन बढ्नेमा कमी आउने, शरीर स्वस्थ रहने र व्रतको दिन नुुन सेवन नगर्ने हुँदा यसले उच्च रक्तचाप बढ्न दिँदैन। शरीरलाई अप्रत्क्ष रूपमा धेरै फाइदा पुर्‍याउँछ।
दीर्घरोगी तथा कुनै पनि औषधी सेवन गरिरहेका बिरामी, गर्भवती र सुत्केरीले ब्रत बस्नु हुँदैन। यस्ता बिरामी ब्रत बस्दा शरीरलाई बेफाइदा गर्ने डा.उप्रेती बताउँछिन्। स्वस्थ र निरोगी मानिसले ब्रत बस्दा भने फाइदा हुन्छ।
खाली पेट बस्न सकिएन भने फलफूल, पानी, जुस, सावुदाना, उसिनेको आलु, हलुवा आदि शुद्ध चिज खाएर व्रत बस्न सकिन्छ। यसले शरीरलाई आवश्यक शक्ति र ऊर्जा प्राप्त हुन्छ।
प्रकाशित: Feb 21, 2020 | 08:29:37